ZESA Inoti Yamirira Kambani yeKushanda Nayo Pakuiswa kweMamita Munyika
Kambani yemagetsi, yeZESA, inoti ine hurongwa hwekuchitanga kuisa mamita ekuti munhu atenge magetsi aanenge achingoda kushandisa chete. Kambani iyi inoti yamirira kuti boka rinoona nezvekutengwa kwezvinhu zvehurumende, reState Procurement Board, ripe tenda kukambani inokwanisa kuwana mamita aya.
ZESA inoti ine hurongwa hwekuisa mamita erudzi urwu mazana matanhatu ezviuru munyika yose.
Kambani iyi inotiwo izvi zvicharerutsira vanoshandisa magetsi kuti vasarudze avanenge vachingoda kushandisa panguva iyoyo.
Dzimwe nzvimbo mumaguta emunyika dzatove kushandisa mamita aya, asi vagari vanoti havasi kuona kurerutsa kwaari kuita matambudziko avo, zvikuru kana magetsi acho achizoramba achidzimwa-dzimwa.
Mutauriri weZESA, VaFullard Gwasira, vanoti vane zvikwereti kuZESA vachawaniswawo mamita aya, asi pachazoiswa nzira dzekuti kambani iyi ikwanise kubata mari dzayo pamari dzinenge dzatengeswa magetsi nevane zvikwereti.
Sachigaro wesangano rinomirira vagari vemuHarare, reCombined Harare Residents Association, CHRA, VaSimbarashe Moyo, vanotiwo vagari havasi kutambira hurongwa uhwu sezvo pasina chiri kumboshanduka kubva pakatanga kuiswa mamita aya.